Igbo Radio - News Reports in Igbo Language - Saskatchewan Magazine of African Arts and Cultures - Advertising
Search ... Muhammadu Buhari akasiela ezi n’ulo Dasuki obi	Details	Written by Voice of Nigeria	Wednesday, November 16, 2016	Onye isi ala Naịjirịa, Muhammadu Buhari, ekwupụtala ka ọdị ya n’obi n’ọzi mgbaru nye ezin’ụlọ Dasuki,gọọmenti nandịSteeti Sokoto niile maka ọnwụ Ibrahim Dasuki, onye jibu ọkwa dịka Sultan nke Sokoto nke iri n’asatọ.
N’okwu ọnụ na-ekwuchitere onye isi ala, Garba Shehu, kwuru, Prezidenti Buhari gakwara n’ihu kasie ndị otu Jama’atul Nasril Islam (JNI) na ndị Supreme Council nke Islamic Affairs obi maka ọnwụ ya.
Read more ...	Bukola Saraki ewubela amụma ịnye ndị ntorobịa ọrụ	Details	Written by Voice of Nigeria	Monday, November 14, 2016	Onye isi ụlọ nzụkọ sinet, Bukola Saraki, ewubego amụma O ji enyere ndị ntorobịa aka, ma kwe nkwa ịnye mmadụ puku iri anọ ọrụ na nke onwe ya.
N’okwu ya n’oge emume a nke ndị bịara ya gụnyere,gọvanọ Steeti Kwara, Maazị Abdulfatah Ahmed, ụfọdụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu nke gọọmenti etiti, na ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ Steeti Kwara, Dr Ali Ahmad. Read more ...	Ala Naịjirịa anabatala ndị ọrụ ubi si mba Rọshịa	Details	Written by Voice of Nigeria	Monday, November 14, 2016	Osote onye isi ala bụ Yemi Osinbajo, ekuola n’Ọ ka mma ịkwado ọrụ ubi n’ime obodo karịa ịtụbata ngwa ahịa nke agaghị enye aka na mgbanwe ego.
Read more ...	A rịọla gọọmenti ala Naịjirịa ka O leba anya na nsogbu enweghị ndị ọrụ ahụ ike na-eji nnwa	Details	Written by Voice of Nigeria, Lagos	Sunday, November 06, 2016	A rịọla gọọmenti ala Naịjirịa ka O leba anya na nsogbu enweghị ndị ọrụ ahụ ike na-eji nnwa n’ụlọ ọgwụ ndị ahụ gọọmenti nwe, iji si etu ahụ kwalite ọnọdụ ahụ ike.
Otu jikọrọ ndị ọrụ ahụ ike na-eji nnwa n’ala Naịjirịa kpọrọ oku a n’ụbọchị Tuzdee n’ọgbakọ ha nwere n’Oshogbo, isi obodo Steeti Osun.
Read more ...	Ndị agha ụgbọelu ala Naịjirịa ga-ewube isi ụlọ ọrụ na Steeti Katsina	Details	Written by Voice of Nigeria	Saturday, October 29, 2016	Ndị agha ụgbọelu ala Naịjirịa ekwuola na ha ga-ewube isi ụlọ ọrụ ha na Steeti Katsina, iji buo agha megide ịhe ịche aka mgba nke ọrụ nchekwa na mpaghara North East nke mgbago ugwu ala Naịjirịa.
Read more ...	Obasanjo arụtụla aka nkwalite azụmahịa iji belata ọnọdụ nhụju anya	Details	Written by Voice of Nigeria	Wednesday, October 26, 2016	Onye chịburu ala Naijiria n’oge gara aga, bụ Olusegun Obasanjo, ekwuputego mkpa Ọ dị na njikọta aka ọnụ n’ịtụ mgbere ahịa ha na mba Afrịka ndị ọzọ. Nke a ga-eme ka A chụpụ ọnọdu afụfụ na ụbịam.
Ụdịrị mmekọ a ga-adi ire site n’ihibe okporo ụgbọ mmiri ga na-akwado azụmahịa kwa mgbe kwa mgbe.
Obasanjo kwụpụtara nke a n’ọgbakọ nkwalite mmepụta akara ngwa ọrụ na azụmahịa agba nke asatọ, n’isi steeti Ogun bụ Abekokuta.
Read more ...	Ịbu agha megide mpụ na aghụghọ	Details	Written by Voice of Nigeria	Wednesday, October 26, 2016	Onye isi ụlọ-ọrụ n’ahụ maka ibu agha megide mpụ na aghụghọ bụ EFCC n’aha ịchafụ, ekwuola sin a, n’enweghị ịsọ anya ọbụna, ụlọ ọru ya na-agba mbọ ibu agha megide nrụrụ aka. O kwuru nke a mbe O jere n’isi ụlọ ọrụ na-ahu maka mmepụta akwa na ngwa E ji akwa ya nke A kpọrọ [NUTGTWN] n’aha nkpirisi na Kaduna.
Magu gara n’ihu kwuo na onye isi ala bụ Muhammadu Buhari nyere ha ikikere inyocha nwafọ ọbụla n’agbanyeghị otu ndọrọ ndọrọ, iji hụ na E meriri mpụ na arụrụala.
Read more ...	Ala Naịjirịa ga-eweta ezi ọnọdụ nchekwa maka ndị chọrọ ịwebata ego n’ọrụ ugbo	Details	Written by Voice of Nigeria	Wednesday, October 26, 2016	Gọọmenti ala Naịjirịa ekwuola na Ọ na–agba mbọ niile O nwere ike maka ịdọta ndị oji ego achụ ego n’ala Naịjirịa.
Read more ...	Ọrịa malerịa egbuola ịhe ruru mmadụ 48 na Sokoto	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, October 21, 2016	O pekata mpe, mmadụ 48 anwụọla na Gandu, nke dị n’okpuru ọchịchị Sokoto North na Steeti Sokoto.
Read more ...	Ndị EFCC ejidogo Fani Kayode	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, October 21, 2016	Ozi anyị nwetere site n’aka ndị Punch na-akọwa na ndị EFCC akpachiela Fani Kayode, onye rụburu ala Naịjirịa ọrụ dịka onye Minista na-ahụ maka njem ụgbọelu.
Read more ...	Ndị agha ala Naịjirịa azọpụtago nwa Chibok ọzọ a tọọrọ	Details	Written by Igbo Service, Voice of Nigeria, Lagos	Friday, May 20, 2016	Ndị agha ala Naịjirịaazọpụtago nwata nwanyị Chibok ọzọ n’ime ụmụnwanyị karịrịnarị abụọ ndị Boko Haram tọọrọ n’obodo Chibok dị na Steeti Bọrọnu n’ọnwa Eprel afọ puku abụọ na iri na anọ.
Read more ...	Daniel Amokachi enwetego ọrụ dịka onye ọzụzụ JS Hercules nke Finland	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, January 22, 2016	Onye ala Naịjirịa ụwa jiri egwu bọọlụ ụkwụ mara, bụ Daniel Amokachi, enwetego ọrụ dịka onye ọzụzụ otu egwuregwu bọọlụ a kpọrọ JS Hercules nke mba Finland. Amokachi kwesịrị ịmalite ọrụ dịka onye isi otu bọọlụ ahụ na-atụfughị oge.
Read more ...	Buhari ekwetego n’ala Naịjirịa ga-akwụrụ ndị niile ahụ merụrụ ahụ na Nyanya ụgwọ ụlọ ọgwụ	Details	Written by Chidi Igwe	Monday, October 05, 2015	N’ụbọchị sọnde, abalị 4 nke ọnwa ọkụtoba, onye isi ala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari mere njem ilete ndị ahụ merụrụ ahụ mgbe ahụ ndị Boko Haram tụrụ ogbuniigwe na Nyanya yana Kuje. Buhari jere na ngalaba ụlọ ọgwụ ala Naịjirịa ebe a na-agwọ ndị ịhe ike mere, bụ nke a kpọrọ Trauma Centre of the National Hospital na bekee maka ilete ndị ahụ ịhe mberede metụtara na Nyanya yana Kuje.
Read more ...	Muhammadu Buhari akwabago n’obi ochichi n’Abuja	Details	Written by Chidi Igwe	Tuesday, June 23, 2015	Ka o mechara izu ụka atọ Goodluck Jonathan nyefere ọchịchị n’aka Muhammadu Buhari, onye isi ala ọhụrụ nke ala Naịjiria bụ Muhammadu Buhari akwabatago n’obi ọchịchị ala Naịjiria dị n’Abuja.
Read more ...	Ndị agha ala Naịjirịa enyefeela mmadụ 275 n’aka ndị NEMA	Details	Written by Chidi Igwe	Sunday, May 03, 2015	Ndị agha nke ala Naịjirịa enyefeela ụmụ ntakịrị na ụmụ nwanyị dị mmadụ 275 n’ọnụ ọgụ n’aka ndị ụlọ ọrụ NEMA. NEMA pụtara National Emergency Management Agency na bekee. A na-akpọ ha ngalaba n’ahụ maka mgbata ọsọ enyem aka n’olu Igbo. Ndị ahụ ndị amị nyefere n’aka ndị NEMA bụ ụmụ aka na ụmụ nwanyị ndị ahụ ndị agha ala Naịjirịa zọpụtara n’ọhịa Sambisa site n’aka ndị otu agha iyi egwu, Boko Haram.
Read more ...	Naịjirịa niile nwe Bụharị, mana enweghị onye nwe mụ	Details	Written by Chidi Igwe	Sunday, May 03, 2015	Ndị Igbo,
Lee nụ okwu onye isi ala ọhụrụ bụ Mụhammadu Bụharị gwara ndị Naịjirịa n’oge mmemme Goodluck Jonathan jiri nyefe ọchịchị ala Naịjiria n’aka Bụhari n’abalị 29 nke ọnwa Mee afọ 2015. Read more ...	Izu agba aka, Voice of Nigeria, Eprel 18 Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, April 18, 2015	Akuko ndi Voice of Nigeria nke abali 18 nke onwa Eprel afo 2015.
Read more ...	Otu jikọtara mba ụwa na-akpọ Buhari oku maka agha Boko Haram	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, April 18, 2015	Otu jikọtara mba ụwa akpọkuona Muhammadu Buhari, onye ga-ewere oche dịka onye isi ala Naịjirịa na nwa mgbe nta, ka ọ ghara ịda mba, kama ka ọ gbadosie ụkwụ ike na mmeri ahụ ndị agha ala Naịjirịa na-enwete ugbu a megide ndị Boko Haram n’ugwu awụsa.
Read more ...	Ụmụ afọ Naịjirịa amalitego ibinye aka n’akwụkwọ	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, March 28, 2015	Ọtụtụ ndị Naịjirịa ndị tozuru etozu maka isonye na ntụli aka nke afọ a, amalitego ibinye aka n’akwụkwọ n’ebe dị ịche ịche. Taata bụ Satọdee, abalị 28 nke ọnwa Maachị afọ 2015 ka a na-eme ntụli aka ozuru ọha maka ịhọpụta onye isi ala, yana ndị omebe iwu.
Read more ...	Ndị agha nke ala Naịjirịa ewegharago Gwoza	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, March 27, 2015	Ndị agha nke ala Naịjirịa ekwuputego na ha ewegharago obodo Gwoza site n’aka ndị otu agha iyi egwu, Boko Haram. N’ozi ha siri na Twitter wepute n’ụtụtụ taata bụ Fraịdee, ndị agha Naịjirịa anagharago ndị Boko Haram obodo Gwoza, ebe ndị otu a jiburu mere isi ọchịchị ha n’ugwu awụsa.